I-Greenwashing, umkhuba wokuthengisa "oluhlaza" | Bezzia
I-Greenwashing, umkhuba wokuthengisa "oluhlaza".
UMaria vazquez | 14/05/2022 10:00 | Izindaba
Ingabe uyayishintsha imikhuba yakho yokusebenzisa ukuze uthole okuzinzile? Mhlawumbe endleleni uzoba nokungabaza okuningi okuhlobene nobuqiniso balokho amalebula alokhu noma lowo mkhiqizo azama ukukudayisela wona. Futhi ukuthi kulula ukuba yikho isisulu sokugeza okuluhlaza.
Izinkampani azidlali ngaso sonke isikhathi ngobulungisa kuzo amasu wokuthengisa. Ezinye izifundo zithi imikhiqizo engu-4,8 kuphela echazwa ngokuthi "luhlaza" esabela ngempela kuzici. Ungawabona kanjani futhi wenze ngokumelene ne-greenwashing?
1 Kuyini i-Greenwashing?
2 Ungayithola kanjani?
2.1 Bika imikhonyovu
Ake siqale ekuqaleni. Yini i-greenwashing? Ngamafuphi, singasho ukuthi yi-a umkhuba wokumaketha oluhlaza ehloselwe ukudala isithombe esingelona iqiniso somthwalo wemfanelo wendawo ezungezile, sisebenzisa ithuba lokuthambekela nokuziphatha okuhle kwabantu abasebenzisa lawa masevisi noma imikhiqizo.
Igama elivela kwelesiNgisi eliluhlaza (oluhlaza) nelithi ukuwasha (ukuwasha), alilisha. Ngokwe-Encyclopedia of Corporate Social Responsibility, kwakuyi- isazi sezemvelo uJay Westerveld owaqamba leli gama endabeni ka-1986, wabe esebhekisela embonini yamahhotela.
Kwaziwa nangokuthi i-eco whitening, ukuwashwa kwemvelo noma i-eco imposture, i-greenwashing badukise umphakathi, egcizelela izifakazelo zezemvelo zenkampani, zomuntu noma zomkhiqizo lapho zingabalulekile noma kungenasisekelo.
Lo mkhuba omubi izinkampani eziningi eziphendukela kuwo namuhla ukuze zihlanze isithombe sazo futhi zizuze amakhasimende zinemiphumela ebalulekile enomthelela omubi kumthengi, imakethe kanye, yiqiniso, imvelo.
kuholela emaphutheni okuqonda kumthengi futhi basebenzise isifiso somthengi sokwakha isiko lemvelo elihle.
Akukhona nje ukuthi inzuzo ekhangisiwe ayenzeki, kodwa yakha umthelela omkhulunoma ngokwandisa ukusetshenziswa.
Kuyingozi kwezinye izinkampani, ngoba kuholela ekuqhudelaneni ngokungafanele, akuhambisani nomthwalo wemfanelo wenkampani emphakathini.
Ukuze ugweme i-greenwashing, udinga ukwazi ukuthi ungayikhomba kanjani. Imaphi amasu asetshenziswa izinkampani ukwenza lo mbono wokuzibophezela kwemvelo noma ukusimama? Ukuzazi kuyosisiza ukuba sinakisise futhi siyiqaphele imilayezo ethile.
Qaphela "imvelo", "100% eco" kanye "bi(o)". Uma umkhiqizo ugqamisa lezi zinhlobo zezimangalo futhi ungahambisani nazo nencazelo enemininingwane, sola. Uma umkhiqizo ungowemvelo ngempela, awunqikazi ukunikeza ulwazi oluningiliziwe nolucacile ngezithako zawo nezindlela zokukhiqiza.
Gwema ulimi olungaqondakali. Elinye isu elivamile ukwethula imigomo noma amagama asho izinzuzo ezisimeme noma zemvelo kodwa ngaphandle komqondo ocacile noma isisekelo.
Ungavumeli umbala ukukhohlise: Ukufaka isicelo kokuluhlaza kumalebula azo kuvamile kulezo zinkampani ezifuna ukukuqinisekisa ngobudlelwano bazo nokusimama nokunakekela imvelo. Yiqiniso, ngenxa yokuthi umkhiqizo usebenzisa umbala oluhlaza akufanele manje ucabange ukuthi kukhona ukukhohlisa, kodwa akwanele ukuwukhetha.
Hhayi ukusekela imbangela eluhlaza Kuluhlaza. Futhi akwanele ukuthi inkampani isekela inhlangano elwela imvelo ukuze iqinisekise ukuthi umkhiqizo wenkampani noma uhlelo lokukhiqiza lunjalo.
Uma amasu ayinhloko esaziwa, indlela engcono kakhulu yokugwema ukuwela ekukhohliseni funda amalebula ngokucophelela futhi uhlukanise ukwakheka komkhiqizo. Kuthiwani uma ulwazi esilufunayo lungekho kulebula? Bese ungakwazi ukukusesha kuwebhusayithi yabo. Sola uma ingekho futhi; ukuntuleka kolwazi olucacile nolunembayo ngokuvamile kuyimbangela yokuqaphela.
Lapho ufunda amalebula kuyoba usizo olukhulu ukwazi izitifiketi zezinkampani zangaphandle abangabandakanyi. Akuzona zonke izitembu ezinenani elifanayo; bheka labo abanikeza iziqinisekiso ezingeni leSpanishi nelaseYurophu. Sesike sakhuluma eBezzia mayelana izitifiketi zendwangu futhi sithembisa ukwenza kanjalo ngaphambi kwamanye ama-European Ecolabels aqinisekisa umthelela olinganiselwe endaweni ezungezile.
Izitifiketi eziqinile zezindwangu okufanele wazi
Lapho uthola umkhonyovu, ungawuqambi, ubike! Ungakwenza ngokusebenzisa amanethiwekhi omphakathi, ngaphakathi kwenkampani efanayo futhi vele njengomthengi kwenye ye izinhlangano zokuvikela abathengi.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Izindaba » I-Greenwashing, umkhuba wokuthengisa "oluhlaza".
Uyifundisa kanjani ingane yakho ukuphuza enkomishini
Imigodi yomlilo yangaphandle ukunikeza ukufudumala kuvulandi noma ingadi yakho
Joyina iBezzia mahhala futhi wamukele konke okuqukethwe ku-imeyili yakho
Yiba ngumbhali wamakhophi